Ukufikelela kwimidlalo ye-paddle ukuya, ukuma kwepelboardboard akunamandla kakhulu. I-paddleboard kunye ne-paddle iya kukufumana emanzini. Kodwa njengawo wonke umdlalo namhlanje, izixhobo, ukuyila kunye nezinto zihlala ziguqula kwaye ziphucula imidlalo. Kwakhona, njengalowo nawuphi na umgcini-mnandi owaziyo ngaphandle, ukuqokelela i-gear iba yinto yokuzilibazisa njengoko sidibene kunye nezixhobo zethu ezikhoyo ngelixa sifanayo sifuna ukuphuculwa kwintsha kunye nokuphucula ngokubhetele kwiibhodi zethu, i-paddles kunye ne-accesories. Nazi ezinye izixhobo ezinokukunceda ukuba ufunde konke malunga nejelo lokumisa i-paddleboard gear oya kulufuna ukuxhaswa kwi-indudu kunye nendlela ofuna ngayo.
I-Standup Paddleboarding Equipment kunye neLuhlu lokuGcina
I-Pelican Rush 11.6 SUP nge Gear. George E. Sayour
Nangona yonke into oyifunayo imfuneko ibhodi kunye ne-paddle, kukho ezinye izixhobo ze-SUP onokufuna ukucinga ukuba nazo. I-pfd ne-leash zizinto ezimbini ezinjalo. Funda malunga nezinye izinto onokufuna ukuzenza kunye nokubandakanya izixhobo zakho ze-SUP. Kaninzi "
Indlela yokukhetha iPaddleboard
Ukumisa iPaddle Paddle eManhatten. © ngu Mario Tama / Getty Images
Kule mini kunye neminyaka unokungena nje kumthengisi omkhulu weebhokisi uze uthenge i-kayak, i-paddleboard, okanye i-kanoe. Kukho iintsuku apho kufuneka uhambe ngokuqinisekileyo ukuya kwi-outfitter. Ukuba uyazi ukuba ufuna ntoni, oku kungaba yindlela efanelekileyo yokuya. Nangona kunjalo, kukho iipaddleboards ezenzelwe iintlobo ezahlukeneyo zokuhamba. Funda konke malunga nalo nqaku. Kaninzi "
Ukukhetha i-Standup Paddleboard Paddle
Werner Spanker SUP Paddle. Ifoto © nrsweb.com, isetyenziswe ngemvume
Ungeke ucinge ukuba kukho i-SUP paddle enkulu. Kodwa ke, enye yezinto ezimbini ezibalulekileyo ukuze ukwazi ukuhamba. Ukongezelela, ukuphakama kwakho ngaphezu kwamanzi xa i-paddleboards ifuna ukuba ube ne-paddle length paddle. Funda indlela yokukhetha i-SUP paddle apha. Kaninzi "
Ukusekwa kweSUPs njani
Ukusekela i-Toe Ten kwi-iSUP kwezinye iindawo. George E. Sayour
I-iSUP imele i-paddleboard ye-inflatable standup. Baqhubelela kwi-rock ekhuni kwimeko emininzi kwaye bayipakisha phantsi kwisikhwama malunga nexesha elifanayo. Ukuba awunayo igaraji okanye indawo epheleleyo kwi-SUP foot 12, i-iSUP ingaba yinto yakho. Funda indlela yokuseta nokutshabalalisa i-iSUP kunye neengcebiso kunye neengcebiso kule nqaku. Kaninzi "
I-Pelican Rush 11.6 INKXASO. George E. Sayour
Iifom, impumlo, umsila, iplagi ye-leash, kunye ne-grab handle kukhona ezinye zezinto kwi-paddleboard yokumisa. Funda konke malunga ne-anatomy kunye neengxenye ze-SUP ukwenzela ukuba bakwazi ukuthetha ngokucokisekileyo nabanye kwi-shishini. Kaninzi "
Icandelo le-SUP Paddle
Child SUP Paddle. © ngu-Getty Images / uStephen Simpson
I-SUP paddles zilula. Kodwa, inxalenye yokungena kwimidlalo iyazi amagama amacandelo kunye nokucingwa kwazo. Nantsi oku kufuneka ukwazi malunga neengxenye ze-SUP paddle. Kaninzi "
Ukuguqula i-SUP yakho kwi-Kayak
Ukufakela umnqamlezo phakathi kwe-paddleboard kunye ne-kayak. Ifoto © George E. Sayour
Ngamanye amaxesha abantu abazi ukuba bafuna i-paddleboard okanye i-kayak. Izithintelo zendawo kunye nebhajethi ingabenza ukuba bangabani nababini kwaye baxinzelele aba bahamba ngeenkcukacha ukuba bazinyule. Ewe, kukho impendulo kule ngxaki. Iiplastiki zokudibanisa i-paddleboards zinokuguqulwa zibe yi-kayaks. Izitolo zangaphandle zangaphandle ziyakwenza oku kuwe okanye unokwenza ukuguqulwa kwakho. Nantsi indlela. Kaninzi "
Iingxelo zokugqibela zeGear Gear
Ezi zixhobo ziza kuhamba kwimidlalo yokumisa i-paddleboarding. Ngokuqinisekileyo, akukho nto inokubetha ukubandakanyeka kwindawo yoluntu kunye nokufunda kwabanye. Ingxenye yokuzonwabisa kumdlalo kukubambisana phakathi kwabadlali. Ngoko, phumela apho kwaye udibane namanye amaS SUPERS. Unokwazi ukujonga iimpahla zazo uze uzame ngaphandle kwamanzi ukuze kukuncede ukuba uyintoni na ukuba ufuna ntoni kwi-paddle yakho okanye SUP.
Iingoma ezili-10 eziphezulu ze-1985
I-12 Diving Concepts Awuzange Ufunde okanye Usukhohliwe
Incwadi Yobuncwane Bantwana: Ngubani na